သတင်းထောက်များ အနေဖြင့် နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အသွင်တူသော ဝတ်စုံများ ?? - Yangon Media Group
နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၁၆
၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် နိုင်ငံ တော်လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အသွင်သဏ္ဌာန်ဖြင့် ယူနီဖောင်းများ ဖန်တီးဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်း မပြု ကြရန်နှင့် ဝတ်ဆင်ကြောင်းတွေ့ရှိပါက တရားဥပဒေအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကြေ ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
အချို့သောသတင်းထောက်များအနေဖြင့် သတင်းရယူဆောင်ရွက်ရာတွင် ဥပဒေနှင့်မညီသောပြုလုပ်မှုများကြောင့် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့ အစည်းများ ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များအလိုက် တည်ဆဲဥပဒေများအရ အရေးယူပေးရန် တိုင်ကြားမှု ၁၂မှုရှိခဲ့ပြီး သတင်းထောက် ၁၅ဦး၊ မီဒီယာအသင်းဝင်တစ်ဦး၊ စုစုပေါင်း ၁၆ဦး တို့အား အရေးယူခဲ့ရကြောင်း စိစစ် တွေ့ရှိရပါသည်။ အချို့သောသတင်းထောက်များသည် အထူးသတင်းထောက်များ၊ မှုခင်းသတင်းထောက်များအမည်ခံ၍ လောင်းကစားမှုများပြုလုပ် ခြင်း၊ မှုခင်းများတွင် အမှုလိုက်အကျိုးဆောင်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ဝင် ရောက်စွက်ဖက်၍ ငွေကြေးတောင်းခံ ခြင်း၊ အသင်းဝင်အဖြစ်လျှောက်ထားသူများထံမှ ဝင်ကြေးများကောက်ခံခြင်း၊ မြေယာကိစ္စများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း၊ ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းလုပ် ကိုင်နေသူများထံမှ လစဉ်ကြေးများ ရယူခြင်းများ ရှိနေကြောင်းကိုလည်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။
မှုခင်းသတင်းထောက်များအပါအဝင် သတင်းထောက်အသင်းများသည် အသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံ တင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ထားသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်၍ အသင်းအဖွဲ့များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင် ရာနည်းဥပဒေ-၄ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ယင်းဥပဒေ ပုဒ်မ-၆(စ)အရ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လဲလှယ်ခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်းကို ငြင်းပယ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သတင်းထောက် အသင်းဝင်များအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အသွင်သဏ္ဌာန်တူသောဝတ်စုံများ ဝတ်ဆင်ခြင်း၊ ဥပဒေမဲ့ငွေကြေးတောင်းခံခြင်းနှင့် ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်များ လုပ် ကိုင်ခြင်းတို့ စိစစ်တွေ့ရှိပါက တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
ပြင်သစ်နှင့် အီတလီနိုင်ငံတို့ ရွှေ့ပြောင်း ခိုလှုံသူများအရေး ပူးတွဲဆောင်ရွက်မည်ဟု မက်ခရွန်?
အဂတိ လိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်က မြို့နယ်တရားသူကြီး၊ ဥပဒေအရာရှိနှင့် ရှေ့နေတို့ကို
ပဲခူးတက္ကသိုလ်၌ကျင်းပသော ကလေးစာပေပွဲတော်၊ ကလေးစာပေပြပွဲနှင့် စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲတော်ဖွင်
မြဝတီခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး အခြားဌာနသို့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း မပြုဘဲ မြဝတီမြို့၌?